अपराधिक अभिव्यक्ति दिने सांसदलाई कारबाही गर – Karnalisandesh
अपराधिक अभिव्यक्ति दिने सांसदलाई कारबाही गर
प्रकाशित मितिः २६ भाद्र २०७८, शनिबार १८:२३ September 11, 2021
पटक-पटक संसद भंग गरेको नेकपा एमाले पार्टी अचेल संसदलाई बन्धक बनाएर उदण्डता प्रस्तुत गरिरहेको छ। जानकारहरुका अनुसार एमालेको वर्तमान गतिविधि संसद भगंकै नयाँ रुप हो। जसरी पनि संसदलाई असफल तुल्याउने र जनतामा संसद भंग ठिक थियो भन्ने पार्न एमालेले एजेण्डाभन्दा पनि प्रोपोगण्डी क्रियाकलाप रोजेको देखिन्छ। जे हाेस् हिजो आज संसदमा जे देखिदैछ यसले एमाले पार्टीलाई थप स्खलित र बदनाम बनाउनेमा दुईमत छैन। आफैले हत्या गरेको संसदलाई सफल रुपमा सुचारु हुन दिने कुरा एमालेका लागि कहाँ जायज हुन्छ र ? तर, एमालेको अराजकता र उदण्डता यसरी नै जारी रहने हो भने अर्को कुनै न कुनै समूह यसका विरुद्धमा सक्रिय हुन्छ नै। यसरी द्वन्द्व बढ्दै जाँदा आमनेसामनेको अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न।
त्यसैले एमाले पार्टीले समयमै गम्भीर बन्नुपर्छ। संवेदनशील हुनुपर्छ। एमालेका जिम्मेवार नेताहरु र सभामुखबीच संवादको आवश्यकता देखिन्छ। बजारमा हाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट सडकमा आएको झोक फेर्न यत्रो तमासा किन गरिरहेका छन्? अर्को पार्टीका सांसदको वहिर्गमन किन चाहिराखेका छन्? आफूले गरेका अपराधहरुलाई लुकाउन या आफू माथि पर्न यसो गर्दैछन्? भन्ने खालका प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’ भन्ने नारा लगाउँदै एमाले पार्टीका सांसदहरुले किन सीमा नाघेर उदण्डता प्रदर्शन गरिरहेका छन्? एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले उनीहरुलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुपर्दैन? भनेर जनताहरुले सोधिरहेका छन्।
उल्लेखित प्रश्नको जवाफ दिन एमाले पार्टीका नेताहरुलाई फुर्सद होला या न होला। तर, यत्ति भन्न सकिन्छ कि जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई यसरी बन्धन बनाएर वा अदालतमा विचारधिन मुद्धालाई नजरअन्दाज गरेर हिड्दा एमालेलाई नै थप घाटा हुन्छ। एमाले नेतृत्वको मुख्य रणनीति नै प्रोपोगण्डाबाट शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने देखिन्छ। यो भन्दा घातक बुद्धि एमालेका लागि अर्को केही हुँनै सक्दैन। यसलाई नत्यागेसम्म एमालेको भलो हुने सम्भावना कम छ। त्यसैले सभामुखमाथि एमाले जति आक्रोशित बन्छ, त्यति नै गल्ति एमालेबाटै हुन्छन्। त्यस्तै खुल्लम् खुला सभामुखको टाउको फुटाउने जस्तो अराजक आवाज बाेल्ने सांसदलाई कानूनी कारबाही किन नहुने ? कानून, नियम र संविधानअनुसार सभामुखमाथि कारबाही गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै यसरी भौतिक आक्रमण गर्ने, धम्की दिने जस्ता कार्यहरु क्षमताहिनताको प्रमाण हुन्। यदि संसदभित्र सांसदहरु यसरी अपराधिक गतिविधिमा संलग्ने हुने हुन् भने आम जनतामा के सन्देश जान्छ? सिधा सिधा सभामुखको टाउको फुटाउँछु भन्नु कहाँसम्मको मुर्खता हो ? यस्ता गैरसंसदीय कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिएन भने आगामी दिनमा झन् खतरा घटनाहरु हुन सक्छन्। त्यसैले पनि भौतिक आक्रमणको धम्की दिने र भौतिक आक्रमणमै उत्रिन खाेज्ने सांसदलाई कानून बमोजिम कारबाही हुनैपर्छ। गरिनैपर्छ ।